Yini ongayivakashela eFlorence | Izindaba Zokuhamba
Florencia kungumuzi ongenakulibaleka, onamasiko nobuciko. Yize abantu abaningi behlala izinsuku ezimbili noma ezintathu, vakashela okusobala kakhulu bese ushiya, iseluleko sami ukuthi uma ungahlala isikhathi eside ngoba kulapho-ke kuphela ezohlala kwimemori yakho kuze kube phakade nangendlela engcono kakhulu.
Ngahlala izinsuku ezinhlanu. Kakhulu? Mhlawumbe, kepha ngithanda ukuhlala emadolobheni ngokuzola, ngokuma kwami ​​kancane bese ngithola izikhathi zaleyo migwaqo engivula engingayazi. Ezokuvakasha fast Akuyona into yami, ngakho-ke lapha ngikushiya yami Umhlahlandlela walokho okufanele uvakashele futhi ukwenze eFlorence.
1 UFlorence, uFirenze
2 Iminyuziyamu yaseFlorence
3 Izigodlo zeFlorence
4 Amasonto aseFlorence
Kungaphezu nje kwamahora amabili ukusuka eRoma nasenhlokodolobha ufika ngesitimela esinejubane elikhulu esuka njalo kusuka eThemini. Akudingekile ukuthenga amathikithi ngaphambi kwesikhathi, ngaphandle kokuthi uvakashele i-Italy kuyisizini ephezulu kakhulu futhi uthanda ukuhleleka konke. Ngaya ngo-Okthoba futhi angibanga nankinga yokufika esiteshini namapotimende ami, ngithenga ithikithi nokungena esitimeleni. Kungakapheli namahora amabili wayesephuma eya eTuscany.
Isiteshi saseSanta Maria Novella ukuphela kweFlorence. Uma ufika kusenesikhathi futhi uphuthelwe ukungena kukhona isitolo semithwalo kupulatifomu yokugcina. Njengoba isiteshi siseduze kakhulu nedolobha elidala, ungahamba uye emuva naphambili. Uma uphuma esiteshini unebandla elinegama elifanayo nalapho kukhona imigwaqo emincane engena engxenyeni endala yedolobha.
Ukuhamba uzungeze unayo amatekisi namabhasi, kodwa iseluleko sami ukuthi uhambe ngezinyawo bese uqasha ibhayisikili. Phakathi kwama-euro ayisikhombisa noma ayisishiyagalombili unebhayisikili lamahora ayishumi nambili futhi lizokuvumela ukuthi uqhubeke, uhambe, usuke kwelinye iphuzu uye kwelinye ngokushesha, uwele i-Arno uvakashele iPalazzo Pitti noma ukhuphuke uye eSontweni LaseSan IMiniato al Monte, isibonelo. Ukuqasha imoto akunconyiwe njengoba idolobha linezindawo eziningi ezivaliwe kuthrafikhi yezimoto.
IFlorence idolobha lamasonto, izikwele, izigodlo neminyuziyamu.
Uma uthanda ubuciko nokwakhiwa kwezakhiwo, iFlorence iyindawo engcono kunazo zonke e-Italy. Ine-Uffizi Gallery, i-Accademia Gallery, iLeonardo Da Vinci Museum, iBarghello Museum kanye neGalileo Museum, isibonelo.
Igalari ye-Uffizi: ingenye ye iminyuziyamu evakashelwe kakhulu e-Italy ngakho-ke thenga amathikithi kusengaphambili futhi uzimisele ukulinda ukuze ungene. Uzobona ngaphakathi kwe- Ukuzalwa kwe-venus neNtwasahlobo, nguBotticelli, iVenus yase-Urbino, esebenza nguGiotto, ngu UCaravaggio, uRembrandt noMichelangelo. Isebenza esakhiweni esimise okwencwadi U okuyinto uCosimo de Medici ayakhele izimantshi zakhe. I- Umhubhe weVasari yiparele lalo, iphaseji - ibhuloho elihlanganisa iPalazzo Vecchio neGalari nePitti Palace engaphesheya komfula i-Arno (ikhilomitha eli-1 ubude, elakhiwe ngekhulu le-XNUMX).
IBarghello Museum: ezithombeni ze-Renaissance kukhona le Museum. Kukhona ubuciko be- Cellini Michelangelo noDonatello, okopende, ifenisha, izindwangu, izindlovu, izitembu, ama-bronzes, i-majolica nezindondo. Umnyango wangaphambili ohlotshiswe ngomlando uyamangalisa. Itholakala eVía del Proconsolo kanti izindleko zokungena zibiza ama-euro angama-4. Kuvulwa ngo-8: 15 ekuseni kuye ku-5: XNUMX ntambama ngoMsombuluko kuze kube yiSonto.
UMnyuziyamu kaLeonardo Da Vinci: ngumnyuziyamu omncane wangasese olahlekile emigwaqweni yedolobha. Bangu ukukhiqizwa kabusha kwemishini yakhe edumile futhi enelukuluku. Ungena esitolo sezincwadi esiseCalle de Servi, umgwaqo omncane oxhumanisa iPiazza Annunziata neCathedral Square. Ukungena kubiza ama-euro angama-7 futhi kuvulwa kusuka ngoNovemba kuya kuMashi nsuku zonke kusuka ku-10 ekuseni kuya ku-6 ntambama naphakathi kuka-Ephreli no-Okthoba kuze kube ngu-7 ntambama.
Igalari Yezemfundo: Yimnyuziyamu ethandwa kakhulu ngoba ineDavid, kaMichelangelo. Iseluleko sami ukuthi sihambe ngemuva kuka-5: 30 ntambama ngoba bavala iminyango ngo-6 futhi kunabantu abancane kakhulu, kokubili kugalari nasesitolo. Uzobona nokudlwengulwa kwabesifazane baseSabine neMadonna neNgane noma iMadonna del Mar, zombili ezenziwa nguBotticelli. Ukungena kubiza ama-euro angama-8.
IGalileo Museum: ubuhle. Ubheke emfuleni futhi kunamathuluzi amaningi nezinsimbi ezakhiwe noma ezenziwe nguGalileo. Bangu amaqoqo esayensi, izibonakude eziningi ezinamakhulu eminyaka zikhona, the Umunwe kaGalileo amabalazwe afanayo, amadala nokunye okuningi. Isitezi ngasinye siyibhokisi lomcebo.
Ngasikhathi sinye, ezinye izigodlo zaseFlorence ziyiminyuziyamu kepha ngincamela ukuzibeka ngaleyo ndlela, ngokwehlukana. Kulesi sigaba singafaka iPalazzo Davanzati, iPalazzo Pitti nePalazzo Vecchio.
Palazzo Davanzati: okumangazayo intengo yamathikithi: ama-euro ama-2! Kuyafaneleka ukuvakashela lokhu isithabathaba esidala se-florentine Ngoba kuyisikhathi esedlule, uzothola ukuthi umndeni othile wokunethezeka kwezomnotho wawuphila kanjani eFlorence yasendulo. Kunconywa futhi ukuhamba nezingane. Uhamba ezitezi ezahlukahlukene zale ndlu, uthola ukuthi ithangi lisebenza kanjani, ukuthi izinceku zazixhumana kanjani phakathi kwamaphansi, uzobona amakamelo ngisho nezindlu zangasese zangaphakathi. KukuVia Porta Rossa, 13 bese kuvalwa ngeSonto lesibili nelesine lenyanga ngayinye, uMsombuluko wokuqala, wesithathu nowesihlanu.
Palazzo Vecchio: umlando wepalazzo usukela kwabaseRoma kepha namuhla uyinhlanganisela ye Izisekelo zaseRoma, inqaba yasendulo kanye nemihlobiso ye-Renaissance. Ihholo elihlaba umxhwele kakhulu yi USalone dei Cinquecento ngophahla oluphakeme ngamamitha ayi-18 luhlotshiswe kahle ngokubunjwa kwegolide namafresco. Kukhona ingxenye yomphakathi nengxenye eyimfihlo, izitudiyo namasonto. Kubuye kube lula ukukhuphukela phezulu kwakho konke ukucabanga ngomuzi futhi uhlale futhi ujabulele ukubuka isikhashana.
Palazzo Pitti: umndeni wakha phakathi nekhulu le-1549 ngaphansi komklamo kaFilippo Brunelleschi. AbakwaMedici bayithenga ngo-XNUMX kanti ngemuva kwesakhiwo sesigodlo kuneBoboli Gardens. Ngaphakathi kuneminyuziyamu eminingana enconyiwe: the IPalatina Gallery, iRoyal Apartments, iMnyuziyamu Yesiliva, Igalari Yezobuciko Yamanje, IPorcelain Museum, Indawo Yokugqoka ngemfashini yamakhulu amathathu eminyaka. Ubuhle. Kulowo nalowo ukhokha okufakiwe okuhlukile: nge-Art Gallery 8, 50 euro, nge-Silver Museum 7 euros, nge-Porcelain 7 euros, nge-Dress 8.50 euros, ngePalatine Gallery naseRoyal Apartments, XNUMX euros.
Izingadi zaseBoboli: Zakha isikhala esiluhlaza kunazo zonke eFlorence futhi sihlehlela engxenyeni yesibili yekhulu le-XNUMX. Banenkundla yemidlalo enhle, iGrotto eyenzelwe uBuontalenti, i-obelisk yaseGibhithe, ichibi lezinhlanzi, kanye nenethiwekhi yemizila ehamba ngezinyawo ehamba nawe ekubukeni okuhle kweFlorence.
Njengawo wonke amadolobha ase-Italy eFlorence maningi amasonto. Ungafaka ezinye zazo nganoma yisiphi isikhathi sosuku, zonke zigugile futhi zonke zibukeka zizinhle kuwe, kepha ngaphandle kokungabaza awukwazi ukuphuma edolobheni ungavakashele ICathhedral, iBaptistery neBell Tower. Ithikithi elifanayo labo bobathathu elihlala amahora angama-24. ICathedral ilula kakhulu futhi akukho okuningi ongakubona, ngaphandle kwe-crypt okufanele uyikhokhele imali ethe xaxa. Kunomnyuziyamu lapho.
para khuphukela edome Kuyadingeka ukuthi uphinde ukhokhe kepha yilokho ongeke wakulahlekelwa. Kuyinto enhle! Ukhuphuka ngemigwaqo emincane, ukhuphuke izitebhisi zamatshe futhi ngemuva kwendlela ende ufinyelela phezulu kwakho konke futhi ukubukwa kuhamba phambili. Okufanayo lapho uqeda ukukhuphuka iBell Tower. Kufanele uhambe ibanga elide, kuyiqiniso, akukhona okwabantu abanezinkinga noma abantu abadala kakhulu, kepha uma kungelona icala lakho ngicabanga Ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokubuka indawo eFlorence.
Phakathi kwalokhu kuvakasha ngizofaka phakathi i- AmaMedici Chapel, i-mausoleum yomndeni, nayo yonke imisebenzi yayo yobuciko. Uma uthanda umdwebo weSidlo Sokugcina, kunezinto eziningana ezifihliwe emasontweni nasezindlini zezindela: ezaseSan Salvi, ezenziwe ngu-Andrea del Sarto, lesi esiseConvitto della Calza, isibhedlela esidala, kanye nesonto laseSanta Croce , eyenziwe nguTaddeo Gaddi.
Ekugcineni, ngebhayisikili noma ngebhasi ungakwazi ukhuphukele esigcawini iMichelangello, lapho kukhiqizwa khona kabusha uDavida. Imibono mihle kakhulu ekushoneni kwelanga futhi uma ukhuphuka kancane ngaphezulu uzofinyelela ISonto San Miniato al Monte lapho izindela zisacula khona izingoma zikaGregory. Kukhona amathuna, i-grove nokuthula okuningi.
Iphuzu ukuthi, njengoba ngishilo ekuqaleni, uma uhlala izinsuku eziningi ungahlala wenza izinto eziningi. Isibonelo, vakashela iStilbert Museum nezikhali zayo ezindala ezinhle noma uthathe uhambo lokuhambahamba emaphandleni bese uvakashela isivini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Florencia » Yini ongayivakashela eFlorence